Mandalay Bloggers: Root Your Android 2.x
Sub Domain အခမဲ့ တောင်းခံနိုင်
http://www.mandalaybloggers.org ကို ၂၀၁၀၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၄ ရက်နေ့တွင် Mandalar.Net နှင့် အိုင်တီမန်း(မန္တလေး) တို့နှစ်ဦးမှ စတင် တည်ထောင် ခဲ့ပါတယ်။MandalayBloggers.org မှ Sub Domain လိုတောင်းခံချင် သူများ ဆက်သွယ်ရန် - nnyioo@gmail.com, Mandalar.Net@gmail.com သို့ အီးမေး ပို့ပေးပါ။(မှတ်ချက် - Gtalk မှ တဆင့် တောင်းဆိုမှုမျိုး မပြုရန် လေးစားစွာ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ် ) Root Your Android 2.x
Root လုပ်ဖို့အတွက် Root Application တစ်ခုလိုပါတယ်။ သို့သော် မိမိကိုင်ဆောင်သော ဖုန်း၏ Brand and Model ကို လိုက်ပြီး Root လုပ်နိုင်တဲ့ Application တွေကို သေချာရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ ယခု စာရေးသူဖော်ပြပေးမည့် Z4root တွင်လည်း သူနဲ့ Compatible ဖြစ်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားများကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ မိမိ၏ ဖုန်းအမျိုးအစား အတိအကျ ပါဝင်မှသာလျင် Root လုပ်ပါရန် ကြိုတင် သတိပေးအပ်ပါသည်။ Z4root
4. ဒီအဆင့်မှာ Root လုပ်ဖို့အတွက် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုရှိပါမယ်။ Temporary Root နဲ့ Permanent Root ပါ။ Temporary Root ကိုရွေးချယ်ပါက Root ကို ယာယီ လုပ်ပေးတာပါ။ ဖုန်းကို ပိတ်မိပြီး ပြန်ဖွင့်ပါက UnRoot ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမြဲတန်း Root အဖြစ်ထားလိုပါက Permanent Root ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ Permanent Root ကို ရွေးချယ်ပြီးပါက Rooting လုပ်နေပါမည်။ ပြီးပါက ဖုန်းကို Restart ချသွားပါမည်။ Android OS ပြန်လည်တက်ပြီးပါက Menu ထဲတွင် SuperUser ဆိုသည့် Application Icon တစ်ခုပေါ်နေပြီ ဆိုပါက Android OS ကို Root လုပ်တာ အောင်မြင်ပါပြီ။ Root လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ကြိုက်ရာ Android Application တွေ၊ မြန်မာဖောင့်တွေ၊ မြန်မာလက်ကွက်တွေနှင့် တခြားကလိစရာတွေ အများကြီးထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဖုန်းက Root လုပ်ပြီးသုံးနေတာဆိုတာကိုလဲ မမေ့ပါနဲ့လေ...။ Root လုပ်ထားတော့ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ်အတားအစီးမရှိ ကလိလို့ရနေမှာပါ။ တချို့ System အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ စာရေးသူဖြင့် မည်သို့မှ မသက်ဆိုင်ပါလေ...။ အိုင်တီမန်း(မန္တလေး) 1 Response to "Root Your Android 2.x"
23 May 2011 05:07
Please HELP ME please!!Recently, I am running on my mistake, really my mistake.I've rooted my C8500 device with z4root and I used root explorer.apkI deleted apk and odex from /system/app , and then my device worked on malfunctionso I copied ALL apk and odex from my friend rooted device and then paste all in that directory and while copying my device rebooted and couldn't loading , it stand on3G surfing screen and couldn't comeover from it. HELP ME!!!!
Last Update Posts from Bloggers
Patching Windows Server 2008 Failover Clusters
Mingalarbar by MgHla Photo Book လေးကို အားပေးကြပါဦး...
blog မှာ ခေါင်းလောင်းသံလေး ကြားစေချင်ရင်
MyanDroid Soft Keyboard Zawgyi for Android
Android ဖုန်းတွင် မြန်မာစာရိုက်၍ အသုံးပြုနိုင်ရန် Android ဖုန်းမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ထည့်သွင်းနည်း သိပြီးပြီဆိုတော့ Myanmar Tutorials က ရေးသား...
Android ဖုန်းမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ထည့်ခြင်း နည်းလမ်း ( ၁ )
စာဖတ်သူတို့က ရှေ့မှာ Android ကို ဘယ်လို Root လုပ်တယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီဆိုတော့... အခု Root လုပ်ထားတဲ့ Android ဖုန်းမှာ ဇော်ဂျီ မြန်မာစာဖောင့် ဘယ...
Exchange Rate in Myanmar ( ရွှေဈေး၊ ငွေဈေး၊ မြန်မာ့ဈေး )
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ တနေ့တာ လည်ပတ်နေတဲ့ ရွှေဈေး၊ ငွေဈေး အပြင် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ တို့ကို Gtalk တွင် Bolt တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြ...
EVDO CDMA 800 ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ပြီး အင်တာနက်သုံးမယ်
CDMA 800 MHz ဖုန်းတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ရန်ကို ရေးသားတင်ပြပြီးပါပြီ။ ယခုထပ်မံပြီး အင်တာနက်ရနေတဲ့ CDMA ဖုန်း ( EVDO SYSTEM ဖွင့်ထားသောဖု...
Root Your Android 2.x
Root ဆိုတာဘာလဲ??? Linux OS မှာတော့ Root ကို Administrator အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ Windows Platform မှာတော့ Admin Level တစ်ယောက်အနေဖြင့် Full Pe...
Ornagai Myanmar-English Dictionary for Android
Android အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် Ornagai Myanmar-English Dictionary ကိုဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ Read more! How to Hack WEP Wireless Security
WiFi ကိုအသုံးပြုတယ့် အခါမှာ Security အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရတယ့် အမျိုးအစား (၃)မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ WEP, WPA နဲ့ WPA2 တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ...
Casino Millionaire | SOCCER MANAGER | class 1 casino | bodog poker | 21novacasino
IT Web & Blog
Myanmar IT Pro Forum
© 2010 Mandalay Bloggers |Blogger Template by Mandalay Bloggers | Hosting
powered by Blogger | WordPress by Nyi Nyi | Converted by Mandalar.Net